Egypta: Aseho masoandro ny tsy fiankinan-dohan’ny vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2008 8:30 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Shqip, Deutsch, Português, Español, English
Fahitalavitra tsy miankina iray mandeha amin'ny satelita ny OTV izay nahasàrika ny sain'ny mpijery maro tamin'ny andro nanombohany, isaorana ny fomba fijeriny malàlaka, ny zavatra arosony sy ny fomba androsoany azy izay samihafa tanteraka amin'ireo fahitalàvitra mikombona sy mitàna ny fomban-dràzana.
i Zaman El Wasl (Ar) mpitoraka blaogy egyptiana, milaza eto ny ampahana valan-dresaka natao momba ny tsy fiankinan-dohan'ny vehivavy.
Tiako ny manaraka – isaky ny afaka manao izany – fandahàrana iray antsoina hoe “Masa'ak Sukkar Zeyada” ao amin'ny OTV.
Ary ny ampahany iray amin'io fandaharana io no miezaka mamàha ny olana ara-pihetseham-pon'ny olona. Ary tamin'izany, no nanombohako nahalàla tanora mpanoratra iray antsoina hoe Marwa Rakha izay niezaka nitondra fanampiana ho famahàna ny olan'ny mpijery, ary nanome azy ireny toro-hevitra izay sitrako tokoa.
Amin'ny lafiny rehetra, nandritry ny fandahàrana tamin'ny Alahady lasa teo, Marwa, Georgette Quelleny – mpikambana iray avy amin'ny antenimiera, sy Buthaina Kamel vahinin'ny Radio/TV dia nasaina indrindra mba hifanakalo hevitra momba ny tsy fiankinan-dohan'ny vehivavy niainga avy tamin'ny horonantsary fanadihadiana iray nitondra ny lohateny hoe Tovovavy enina (Six Girls).
Manohy hatrany ilay mpitoraka blaogy:
Raha ny fahalalàko azy, miresaka momba ankizivavy sy vehivavy voatery handao ny tokatranon-draiamandreniny ka handeha hipetra-drery noho ny asa na fianarana any an-tanàn-dehibe ilay horonantsary. Ny betsaka tamin'ny fifanakalozan-kevitra dia nikasika daholo ny tsy fiankinan-dohan'ny vehivavy – mihoatra lavitra noho ny fifanakalozan-kevitra aza ilay horonantsary fotsiny amin'izao. Ny hevitr'izy ireo momba ny tsy fiankinan-doha dia nirona betsaka tamin'ny fandaozan'ny vehivavy ny raiamandreniny ka miaina irery isaky ny misy izay ahafahana manao izany. Marwa sy Buthaina dia samy niaro mafy io fomba fijery io, raha i Georgette – sy izaho koa – dia manohitra izany, satria tsy voatery velively hanao toy izany ny vehivavy.
Mifanipaka amin'io hevitra io ny ahy, tsy noho ny resaka ara-pinoana na antony ara-pitsipi-pitondran-tena, na noho ny tahotro ny vavam-bahoaka momba ny ankizivavy mitoetra irery amina trano mitokana na dia miray tanana amin'ny raiamandreniny ihany aza!! Laviko io fomba fihevitra io satria tsy raisiko hoe ny fahaleovan-tena – ara-ponenana- no tena endriky ny tsy fiankinan-dohan'ny olona, na lahy izy na vavy.
Mino aho fa ny tsy fiankinan-doha dia ny fahafahan'ny tsirairay mandray fanapahàn-kevitra tsy ieràny amin'ny hafa—raha tsy hoe nangataka toro-hevitra tamin'izy ireo angaha izy. Ny tsy fiakinan-doha dia azo atao koa hoe tsy fiankinan-dohan'ny olona iray ara-bola sy fahafahany mizaka tena amin'ny filàny andavanandro ary ny fiahian'ny izay zavtra rehetra ilain'ny ankohonany.
Iray tamin'ireo mpijery no nitondra fomba fijery hafa.
Iray tamin'ireo mpijery – izay toa mànana feo-na renim-pianakaviana – no nanontany : Nahoana ny ankizy no manao izay tsy hiraisana amin'ny fianakaviany sy tsy mifampizara fitiavana ary tambitamby ambara-pahatongan'ny fotoana tena mety handehanan'izy ireo.
Izany eo ihany, fa ny olona eto Egypta dia zatra miara-miaina amin'ny raiamandreniny mandram-panambadiny. Ary izay no antony mahatonga ireo maro nitondra fanamarihana tamin'ity hafatra ity hanohitra ny hevitra manosika ny olona handao ny tranon-draiamandreniny, indrindra fa ny zazavavy